Ma dhabaa in Somalia xukunkeeda lagu wareejinaayo shan dal oo ka mid ah dowladaha ugu awooda badan caalamka?!! | Building Momentum
Ma dhabaa in Somalia xukunkeeda lagu wareejinaayo shan dal oo ka mid ah dowladaha ugu awooda badan caalamka?!!
Qorshaha shirka ayaa ah in marka hore uu madax u noqda Somalia nin Faransiis ah halka ku xigeen looga dhigaayo nin Turki ah sidaan ku helnay il wareet lagu kalsoonyahay oo wax ka wada shirka diidayna in magaciisa la xuso.
Warkaan ku saabsan in Somalia la galinaayo gumeysi casriyeysan ayaa isa soo taraayo iyadoo kooxoda xiirirka caalamiga oo shirka ay ku leeyihiin Jabuuti ay arintaas si hoose ugu sheegayaan madaxda Soomaalida.
Si kastaba ha ahatee waxaa xiligaan u muuqda in Soomaliya galeysa gumeysi cusub oo la ogeyn xiliga uu ku ekaan doono .